Toko 3353 an'ny Zanakalahy mahatalanjona ao amin'ny lalàna an-tserasera - XperimentalHamid
Toko faha-3353 an'ny Zanaka Mahagaga ao amin'ny Novel maimaim-poana amin'ny Internet
Vakio Chapter 3353 amin'ny tantara Ilay Zanakalahy Mahagaga by Ravina Lord maimaim-poana amin'ny Internet.
Raha vantany vao nifandray ilay telefaona dia nanontany avy hatrany an'i Walter i Joseph hoe: "Inona no vaovao tsara holazaina amiko?"
Natahotra i Walter nilaza hoe: “Commander faratampony …… androany fa nahita olona afovoany tonga i Hamid ary nilaza fa te hihavana ……”
“Dinika fandriampahalemana?” Tezitra avy hatrany i Joseph nilaza hoe: "Izy sy ireo miaramila eo ambaniny dia tompon'andraikitra amin'ireo miaramila maherin'ny 2,500 ao amin'ny Front Cataclysmic Front ahy izay nanao sorona ny ainy, tsy hanaiky valiny hafa aho raha tsy ny hamafana azy ireo tanteraka!"
Walter dia nanana herim-po nilaza hoe: “Commander Supréme, ny olana izao dia tsy afaka mitsako akory an'io Hamid io isika, ny hany fomba tokana dia ny mitazona eto.”
“Tsy zavatra tsara ny mitohy toy izao! Ny fatiantoka ara-toekarena isan'andro dia tena matotra. Tsara lavitra noho ny mendrika ny mandeha toa izao …… ”
Hentitra i Joseph: “Raha mbola manodidina azy ireo tanteraka ianao dia aza avela handositra, tsy ho ela dia ho korontana izy ireo, na dia tsy maty aza.”
“Tsy haharitra ela izy ireo! Vondron-dehilahy antitra avy any amin'ny tendrombohitra Moyen Orient, ahoana no hahafahany miady amin'ny ady maharitra amintsika amin'izao fotoana izao? ”
Walter dia nisakana ny fisentoana ary nilaza hoe: “Commander Suprindra …… saingy ny olana lehibe dia efa nitahiry famatsiana stratejika avo lenta i Hamid, ny hafa tsy sahiko lazaina intsony, miaraka amin'ny famatsian-dry zareo ankehitriny, olona 10,000 XNUMX no afaka maharitra herintaona. ”
“Azo antoka fa tsy misy olana. Saingy tsy manana fomba hijanonana eto aminy mandritra ny herintaona isika, ah, ary izao dia hiala ihany koa ny fanjakan'ny tafika …… ”
Raha nilaza izany i Walter dia nanome tatitra an-tsipiriany momba ny toe-javatra misy azy miaraka amin'i Joseph.
Rehefa henon'i Josefa ireo toe-javatra ireo dia nirehitra ny fahatezerany.
Saika nisafoaka mafy izy: “Walter! Tsy mbola nandalo fatiantoka lehibe toy izany aho, tsy namoy lehilahy maro be toy izany, ary tsy nametraka ny tenako tamin'ny toe-javatra mandalo toy izao nandritra ny taona maro taorian'ny nananganana ny Cataclysmic Front! Tena namaky firaketana maromaro nifanesy ianao! ”
Walter koa dia feno fitarainana tamin'ity fotoana ity, ary nilaza tamim-pahoriana hoe: "Commander Supride, miaiky aho fa somary mora tezitra aho taloha, tsy nanantena ny hihaona amin'ny mpanohitra mendrika any Syria."
"Vonona ny hanaiky ny sazinao aho amin'ny fotoana rehetra, fa ny olana lehibe indrindra izao dia ity Hamid ity nanodidina ny tenany tamin'ny barika vy, ary nanomana famatsian-tsakafo marobe ihany koa, ireo olontsika 15,000 dia ao anaty olana fotsiny!"
“Raha misintona ny herin'ny governemanta ary ny olontsika sisa tavela eto hanodidina an'i Hamid, vao mainka hahamenatra ny toe-draharaha, handoa fotsiny ireo mpikarama an'ady miasa ho azy ireo ny herin'ny governemanta, ary tsy hoe resy fotsiny isika taorian'ny nahatongavantsika teto . ”
“Ary raha mijanona tsy mifanaraka amin'ny fanirian'izy ireo isika, mety hiodina hanohitra antsika koa izy ireo noho io, dia tsy ho very maina izany ……”
Tezitra be i Joseph ka tsy afaka niandry ny ho any Syria manokana izy ary nanorotoro an'i Hamid, satria fantany fa raha mbola maty i Hamid ity dia ho rava tanteraka ireo mitam-piadiana, ary avy eo afaka voavaha ny olana rehetra.
Na izany aza, nojereny ireo vatam-paty mora vidy niavosa teo alohany. Tao am-pony dia tsy afa-nanoatra izy fa nananatra ny tenany fa tsy tokony ho variana sy tsy ho variana izy amin'izao fotoan-tsarotra izao.